Sina andiana mpamorona sy mpamatsy sehatra famahanana manan-tsaina | Baiyi
Anaran'ny vokatra: Sehatra famahanana manan-tsaina sy fanaovana pirinty mahazatra
Modely: BY-TF01 / 02-400; BY-TF01 / 02-400 （UV）; BY-HTF01 / 02-400; BY-HTF01 / 02-400 (UV); BY-MTF02-650(maodely dimy)
Endri-javatra:novolavolaina ho an'ny fanontana mahazatra (ao anatin'izany ny mpanonta TIJ, HD DOD, fametahana marika sns). manana fitakiana avo lenta amin'ny haitao, be pitsiny matanjaka, be pitsiny fampiharana. Izy io dia mandray ny fomba fijery endrika mahira-tsaina, modular ary mirindra. Mety amin'ny karazana taratasy, marika, karatra, boaty famonosana, indrindra ho an'ny vokatra misy herinaratra mijanona, famehezana tena, boaty plastika marobe sns kitapo fonosana manokana, fanontana sy fanarahana. Misy fiasa tsy voatery atao amin'ny fisafidianana toy ny detection roa, manitsy ny fiara, mandà auto sns.
Ny sehatra famahanana manan-tsaina dia novolavolaina araka ny fepetra takiana amin'ny indostria. Ny rehetra dia mandray ny fomba fiasa miasa sy ny maodely fihinana manan-tsaina. Haingam-pandeha, tsara filaminana, matanjaka amin'ny asany, tsara endri-javatra, manan-karena amin'ny asan'ny safidy. Tsy mety amin'ny karazana vokatra ihany io, fa manana traikefa tena tsara ho an'ny fiasan'ny mpampiasa ihany koa. Ity sehatra ity dia mandray rafitra mahery vaika sy singa elektrika marika kilasy voalohany hahazoana antoka fa azo antoka ny fampiasana azy.
Izy io dia manana teknolojia patanty amina am-polony ary mandray ny teknolojia fizotran'ny toetr'andro sy ny fomba fifehezana kalitao henjana, izay mahatonga ity vokatra andiany ity hanana tombony kalitao matanjaka. Araka ny fampiharana samihafa, misy vokatra dimy:
1. sehatra fanaovana pirinty manan-tsaina mahazatra (Model: BY-TF01 / 02-400);
2. sehatra famahanana manan-tsaina & fanontana V mahazatra (Model: BY-TF01 / 02-400 (UV));
3. Sehatra famahanana & fanaovana pirinty haingam-pandeha haingam-pandeha (Model: BY-HTF01 / 02-400);
4. Famahanana haingam-pandeha haingam-pandeha & sehatra fanontana UV (Model: BY-HTF01 / 02-400 (UV));
5. Sehatra famahanana manan-tsaina sy pirinty marobe (fakan-tsary: ​​BY-MTF02-400).
Ny fahasamihafana Max eo anelanelan'ny "sehatra famahanana manan-tsaina sy fanontana mahazatra" sy ny "fantsom-panafody manan-tsaina mahazatra & sehatra fanontana UV" dia fotoana fampiharana. Ny sehatra famahanana manan-tsaina sy fanontana an-tsokosoko dia mety amin'ny fampiharana ny kaody mahazatra an'ny vokatra. Toy ny TIJ, CIJ, Laser sns. Ny sehatra fampiasan-tsaina manan-tsaina & sehatra fanontam-pirinty UV dia miaraka amin'ny Palsma ho an'ny fizotran'ny vokatra sy ny toeram-pitsaboana, izay mety amin'ny rafitra fanontana UV. Misy fahasamihafana kely amin'ny teknolojia.
"Sehatra famahanana saina & haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha" ary "sehatra fanaovana pirinty haingam-pandeha haingam-pandeha & sehatra fanaovana pirinty UV" no nanao ny fanavaozana ho an'ny fikirakirana miorina amin'ny sehatra mahazatra. Haingam-pandeha ny hafainganam-pandeha, mihamafy ny fitoniana. Ny vatan'ny masinina dia mandray vy vy na karbonina misy sary hosodoko (azo namboarina ny loko), volavola feno mihidy, firafitra bebe kokoa. Ireo fitaovana 4 karazana ireo noho ny vatany matanjaka sy ny fahombiazany marina, izy ireo dia afaka ampiarahana amina asa tsy voatery atao toy ny rafitry ny detection roa, ny rafitra manitsy ny fiara, ny rafitra fizahana maso, ny rafitra fandavana ho azy. Ireo fiasa tsy maintsy atao ireo dia mahatonga ny fitaovana ho manan-tsaina kokoa sy tsy mitantana olona.
Ny sehatra famahanana manan-tsaina sy fanontana an-tserasera marobe dia mifototra amin'ny sehatra mahazatra ary hampiakatra ny fahombiazany sy hampihena ny vidin'ny mpiasa. Misy fantsom-bokatra roa na maromaro. Ny olona dia afaka manamboatra ny singa famahanana amin'ny vokatra iray mihazakazaka fantsona miovaova avy eo mifanaraka amin'ny vokatra lehibe. Izy io dia iray amin'ireo vokatra avo lenta avo lenta.
1. Sehatra famahanana manan-tsaina sy fanontana mahazatra
2. sehatra famahanana manan-tsaina & fanontana UV
3. Sehatra famahanana saina sy haingam-pandeha haingam-pandeha
3. Famahanana haingam-pandeha haingam-pandeha & sehatra fanontana UV
1. sehatra famahanana manan-tsaina sy fanontana marani-tsaina
A. refy: L * W * H = 3000 * 763 * 820mm
B. lanja: manodidina ny 150-200KG
D. Herin'aratra: manodidina ny 2KW
E. hafainganam-pandehan'ny fehikibo: 0-60m / min
F. fifehezana: fiovam-po matetika / fanaraha-maso hafainganam-pandeha DC
Fitsipiky ny sakafo H.: fikorontanana manan-tsaina, fandefasana ambany.
I. fomba fampitaovana: fehin-kibo mpampita
Vokatra J. misy: karazana boaty taratasy, kitapo fonosana, marika, taratasy, boky torolàlana sns.
K. haben'ny vokatra azo: L * W * H = (60-300) * (30-400) * (0.05-3) mm
L. vokatra mihazakazaka mihazakazaka: ± 1.5mm
Fitaovana ho an'ny masinina M.: vy vy na vy vy misy sary hosodoko (azo namboarina ny loko)
N. fomba fametrahana: fisondrotan'ny gorodona, tsipika ivelany, fanohanana ivelany.
O. fanahafana mahazatra: fahanana manan-tsaina & fampidirana fantsom-bovoka ary fanangonana fiara.
P. lahasa tsy voatery: detection double, fanitsiana mandeha ho azy, rafitra fanaraha-maso maso, fandavana auto.
A. refy: L * W * H = 3600 * 763 * 820mm
D. fahefana: manodidina ny 2KW
Fitaovana ho an'ny vatana M.: ny vy vy na ny karbaona misy sary hosodoko （dia azo namboarina）
O. fanahafana mahazatra: famahanana marani-tsaina & fampidirana fantsom-bovona ary fitaterana hafanana avo lenta sy fanangonana fiara-mandeha
B. lanja: 200-250KG eo ho eo
E. hafainganam-pandehan'ny fehikibo: 0-100m / min
Fomba fametrahana N.: ivelan'ny tany ivelan'ny tany, karazana kabinetra.
O. fanahafana mahazatra: famahanana manan-tsaina & fampidiran-drivotra & fanangonana mandeha ho azy.
4. Famahanana haingam-pandeha haingam-pandeha & sehatra fanontana UV
A. refy: L * W * H = 4220 * 763 * 820mm
B. lanja: manodidina ny 250-300KG
D. fahefana: eo amin'ny 2.5KW
O. fanahafana mahazatra: famahanana marani-tsaina & mpampita fantsom-pifandraisana & mpanelanelana amin'ny hafanana avo lenta & fanangonana fiara
Teo aloha: Famahanana & TTO fanontana an-tserasera rehetra ao anaty iray
Manaraka: Rewinder mahazatra miaraka amin'ny mpanonta TTO